Koombo: ndiani anoti Linux yako haigoni kukuisa muchimiro? | Linux Vakapindwa muropa
Iye zvino imwe yenyaya idzi neimwe yeaya software isinganyatso kuzivikanwa, asi izvo zvinogona kubatsira zvakanyanya kune vamwe vashandisi vasina kuzviziva izvozvi. Ino nguva ine zvakawanda zvine chekuita nekugwinya kwako uye kudzidziswa. Ichi chirongwa chinonzi Koombo iyo iwe yaunowana mune zvimwe zvitoro zveapp, senge Ubuntu, kana kurodha pasi kubva ku zviri pamutemo webhusaiti.
Kuti ushandise chishandiso ichi, kana uchinge wave neapp mauri, kungave kwePC yako yeLinux kana yefoni yako yeApple, unofanira kungobatana kuti utange kusarudza iyo maitiro uye kurovedza muviri izvo zvinonyatsoenderana nerudzi rwekudzidziswa kwaunoda kune yako chaiyo kesi uye zvinoenderana neyako mamiriro ehutano. Iwe unogona kuona maitiro nekudzvanya iyo Play yemavhidhiyo kuti udzidze maitirwo azvo uye tarisa pakugadzirisa iko kuita uye kuzvikurudzira iwe pachako kuzadzisa zvibodzwa zvitsva.
Chishandiso chakaringana che simbisa kushanda kwako, batsira yako yekuita nguva yekupa chiitiko chiri nani. Rutsigiro rwekuteerera rwevatambi rinotungamirwa muapp. Kunyanya zvakadaro ikozvino, kuti nedambudziko redenda uye kurambidzwa kwenzvimbo dzemitambo, hazvizokuvadza kudzidzira pamba.
Uye zvakare, yakanaka yevarairidziSezvo inogona kubvumidza vadzidzi kuti vadzidze kuita kurovedza muviri naKoombo uye ivo vanogona kutarisisa kugadzirisa mamwe maitiro avanotadza zvisirizvo. Muchokwadi, iri ibasa chairo, kunyangwe vazhinji vashandisi vachishandisa ivo kuva yavo yega "murairidzi" ...
Uye kana izvozvo zvichiita sezvishoma kwauri, unogona kurisimbisa nemamwe maapplication Zvakafanana nekutarisira hutano hwako uye kugwinya kweLinux:
Kudya Clock / Cron-O-Meter: kudzora macalorie ako mune chikafu.
Vadivelu Comedy SportsTraker: kuchengetedza mitambo yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Koombo: ndiani anoti Linux yako haigoni kukuisa muchimiro?
Pepa rekutarisana akadaro